Ucam, सानो ईन्क्रिप्टेड र सुरक्षित निगरानी क्यामेरा
उकाम, सानो ईन्क्रिप्टेड र सुरक्षित निगरानी क्यामेरा
Ucam आईओटेक्स कम्पनीको एक सानो क्यामेरा हो जसले बजारमा सबैभन्दा भर्खरको निगरानी सुविधाहरू प्रदान गर्ने बाहेक, गोपनीयता र सुरक्षा blockchain र डाटा ईन्क्रिप्शन को लागी धन्यवाद।
घर वा कार्यालय मा एक निगरानी क्यामेरा स्थापना गर्न को लागी हाम्रो कारण जेसुकै होस्, एक कुरा निश्चित छ, यो हो कि हामी जासूस गर्न चाहँदैनौं। बदलामा! दुर्भाग्यवस, केहि कम्पनीहरूले क्यामेरा ह्याकि sc घोटालाहरू अनुभव गरेका छन्। नतिजाको रूपमा, धेरै व्यक्तिहरू अब एक प्राप्त गर्न अनिच्छुक छन्।
अन्य क्यामेराहरू जस्तो नभई, Ucam ले ब्लकचैन प्रयोग गर्दछ जुन हामीसँग सुरक्षित छआवश्यक पर्दछ।
blockchain र ह्याकिry रोक्न एन्क्रिप्शन Ucam क्यामेरा को मुख्य विशेषता यो हो कि यसले blockchain हामीलाई सुरक्षा र गोपनीयता प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछ जुन हामीलाई वास्तवमै चाहिन्छ। मूलतः, blockchain डाटाबेस को रूप लिन्छ कि जानकारी भण्डारण र प्रसारण को लागी एक टेक्नोलोजी हो, तर जुन कुनै केन्द्रीय शरीर मा निर्भर गर्दैन। यसको वेगको साथसाथै यसले अधिक सुरक्षित हुने फाइदाहरू पनि छ।
संक्षेपमा, जब हामी मोबाइल अनुप्रयोग प्रयोग गरेर हाम्रो क्यामेरा कन्फिगर गर्छौं तब यूक्यामले सीधै यो प्रविधि प्रयोग गर्दछ। प्रत्येक उपयोगकर्ताको लागि एक अद्वितीय character० चरित्र कुञ्जी सिर्जना गरिएको छ र यसलाई बिना कोहीले पनि हाम्रो क्यामेरामा जडान गर्न सक्दैन।
यो अनुप्रयोगमा स्थापना रद्द गर्ने वा फोन परिवर्तन गर्ने स्थितिमा यसलाई कतै लेख्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि कसैसँग छैन। प्रतिलिपि गर्नुहोस्, IoTeX कम्पनी पनि हैन।
अन्य क्यामेरा प्रणालीहरूको विपरीत, तपाईंले खाता सिर्जना गर्नुपर्दैन।, त्यसैले ह्याक गर्न असम्भव छ!
रेकर्ड गरिएका भिडियोहरूको लागि तिनीहरू अन्त-देखि-अन्तमा ईन्क्रिप्टेड हुन्, जसले उनीहरूलाई माथि उल्लेख गरिएको हाम्रो ब्लकचेन पहिचान बिना नै पहुँचयोग्य बनाउँदछ।
जडानका लागि पनि त्यस्तै अनुप्रयोग, तपाईंसँग पिन छनौट गरिएको वा बायोमेट्रिक प्रणाली (फिंगरप्रिन्ट, अनुहार पहिचान, आदि) प्रयोग गरेर त्यस्तो विकल्प छन।
हामी हाम्रो मोबाइल उपकरणमा के देख्न सक्दछौं त्यसको एक सिंहावलोकन हाम्रो Ucam मा जडान भएको। बजारमा सब भन्दा भर्खरका सुविधाहरू उपयुक्त अनुप्रयोगलाई धन्यवाद, हामी पूर्ण रूपमा हामीले कब्जा गर्छौं नियन्त्रण गर्दछौं, हामी हाम्रो जानकारी निजी राख्न चाहान्छौं, यसलाई हाम्रो नजिकै साझेदारी गर्नुहोस् वा उनीहरूको प्रयोग सेवा प्रदायकहरूलाई आधिकारिक बनाउँनुहुनेछ। क्यामेरा निगरानी बजारमा सबैभन्दा भर्खरका सुविधाहरूसँग सुसज्जित छ:
एन्क्रिप्टेड 1080p० एचडी भिडियो उकमबाट मोबाइल उपकरणमाहाम्रो छनौटको।
-360० डिग्री कभरेज जसमा पान मोड, झुकाव र टाढा बाट जूम गर्ने क्षमता समावेश छ।
गति पत्ता लगाउने एक अलार्म र एक रेकर्डि trigger ट्रिगर गर्न सक्दछ।
स्वचालित रात दर्शन, जसले feet 36 फिट दृश्यतासम्म अनुमति दिन्छ।
दुई-तर्फी अडियो जसले हामीलाई घरमा कसैसँग पनि कुरा गर्न दिन्छ।
आकारको मामलामा क्यामेरा, हामी विशेष गरी यसको सानो आकार मन पराउछौं, जुन घर वा अफिसमा लुक्नको लागि यसलाई वास्तवमै व्यावहारिक बनाउँदछ।
अनुप्रयोगका साथ कन्फिगर गर्न सबै कुरा साँच्चिकै सजिलो छ, जुन फ्रान्सेली भाषामा पनि उपलब्ध छ र यससँग उपयुक्त छ। आईओएस र एन्ड्रोइड, ताकि एक शुरुआतको रूपमा पनि, हामी राम्रो गर्छौं।
केवल नकारात्मक पक्ष के हो भने
ले degrees 360० डिग्री शूट गर्न सक्दछ र आन्दोलन पत्ता लगाउन सक्छ, यसले स्वचालित रूपमा व्यक्तिलाई पछ्याउँदैन। लेन्सको अगाडि पार गर्दै।
हामी व्यक्तिहरू हौं जुन म्यानुअल तरीकाले सार्नु पर्छक्यामेराको दृश्यदर्शी, तर तपाई आवाश्यकताका साथ दिनको सबै समयमा अनुप्रयोगमा जडित हुनुहुन्न।
मूल्यको बारेमा, क्यामेरा लगभग sells डलरमा बेच्छ जुन तपाईलाई करिब पन्ध्र पैसा शुल्क जोड्नु पर्छ। डलर।
रेकर्डि space स्पेसको बारेमा, उकमले हामीलाई उनीहरूको क्लाउडमा प्रति १० सेकेन्ड अन्तरालमा hours घण्टा नि: शुल्क अधिकार दिन्छ। अन्यथा, तपाईंले २० सेकेन्डको भिडियो अन्तरालको साथ असीमितको लागि प्रति वर्ष अमेरिकी डलरमा योजनाको लागि छनौट गर्नुपर्नेछ।
तपाईं पनि तिनीहरूको भण्डारण सेवा प्रयोग नगर्ने छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो पक्षमा सबै बचत गर्नुहोस्, एक माइक्रोएसडी प्रयोग गरेर। कार्ड, तर स्पष्टतया यसको मतलब ब्याकअप स्पेसको अधिक सीमित मात्रा हो।
IoTeX को Ucam निगरानी क्यामेराको बारेमा अधिक जान्नुहोस्
Amazon.ca मा एक Ucam क्यामेरा प्राप्त गर्नुहोस्।
यस स्तम्भले सम्बद्ध लिंकहरू समावेश गर्दछ।
२ औं पुस्ताको गुगल नेस्ट हब आवाज सहायकको साथ तपाईंको निद्रा निरीक्षण गर्नुहोस्
गुगलको नेस्ट हब २ पुस्ता भ्वाइस सहायकसँग तपाईंको निद्रा निरीक्षण गर्नुहोस् Google ले यसको भ्वाइस सहायकको दोस्रो पुस्ता प्रदर्शनको साथ सुरू गर्दै छ: नेस्ट हब। यसको स्पिकरको ध्वनि गुणस्तर 50०% ले सुधार गर्नका साथै यस नेस्ट हबको महान नवीनता यो हो कि यसले हाम्रो निद्रा ट्र्याक गर्न र मोनिटर गर्न सक्छ। ब...
कर्डलेस हाइड्रोपुल्सरको साथ पहिले भन्दा बढी कुशलताका साथ फ्लोस
होम फ्लोस कर्डलेस हाइड्रोपुल्सरको साथ पहिले भन्दा बढी कुशलतासाथ भेट्नुहोस् वाटरपिक कर्डलेस हाइड्रोपुल्सर, एक ग्याजेट जसले दाँतको फ्लोसलाई पानीको जेटले प्रतिस्थापन गर्दछ थप प्लाक हटाउन र गम स्वास्थ्य सुधार गर्न। पोर्टेबल र ताररहित, ग्याजेट साना बाथरूमको लागि उपयुक्त छ वा वरिपरि लगाइन्छ। म तपाईलाई दाँ...
इको शो १०: आवाज सहायक जसले घर वरिपरि शाब्दिक रूपमा हामीलाई पछ्याउँछ
होम इको शो १०: आवाज सहायक जसले घर वरिपरि हामीलाई पछ्याउँदछ अमेजनले एक १०. १ ईन्च स्क्रीन, इको शो १० को साथ एक नयाँ आवाज सहायक सुरू गर्‍यो, हामीलाई हाम्रो कार्यहरू, हाम्रो दैनिक अनुरोधहरू र हाम्रो गृह स्वचालन उपकरणहरू, सहायक हाम्रो यात्रा मा हामीलाई अनुसरण गर्न यसको क्षमता बाहिर खडा छ।बाजार मा धेरै आ...